Waxaan ku leenahay Shiinaha 30 shaqaale dhismaha ah. Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay koox dhisme koriin joogto ah ka joogta Mareykanka.
Sannado waayo-aragnimo shaqo oo lagu koriyo ah, Naqshadeynta aqalkayaga-koriyo aad ayaa loo qaabeeyey, sidaa darteed shaqaaluhu waxay karti u leeyihiin dhismaha habab badan, iyaguna sidoo kale si fiican ayey u dhammaystiri karaan hawlahan.
Iyadoo lala kaashanayo 4 shaqaale ah, aqalka dhirta lagu koriyo ee tunnel ah 10 mitir oo balac ah iyo 40 mitir oo dherer ah ayaa qaadatay 5 maalmood in la dhamaystiro dhismaha.
Laga soo bilaabo marka sheyga yimaado ilaa iyo inta lagu wareejinayo macmiilka Dhamaanteen waxaan leenahay seddex talaabo si aan u hubino tayada dhismaha.
Markii qalabku yimaado goobta, waxaan tijaabin doonaa tayada iyo tirada qalabka si loo hubiyo habsami u socodka mashruuca Foomka xaqiijinta ayaa markaa la siiyaa macaamilka si uu u saxiixo una xaqiijiyo.
Kadib, geeddi-socod kasta oo dhisme ah wuxuu leeyahay kormeer, dhisme, iyo xaqiijinta macaamiisha.
Markay dhammaan mashruucyadu dhammaadaan, macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu tijaabiyo aqalka dhirta lagu koriyo ah illaa macaamilku ka qanco, ka dibna u saxiixo keenista.
Waxaad ogaan kartaa in macaamiisha ay ku lug leeyihiin dhammaan howlaha dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo. Tani waxay hubineysaa tayada aqalka dhirta lagu koriyo.
Haddii aad mashquul ku tahay kaqeybgalka dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo. Ha welwelin. Gurigayaga lagu koriyo wuxuu bixiyaa adeeg damaanad qaad ah.
Bixinta adeegyada dhismaha ma aha oo kaliya dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo. Waxay sidoo kale siinaysaa macaamiisha khibrad wanaagsan oo lagu koriyo.
Nalalka qaabdhismeedka biraha fudud
»Cusbooneysiinta aqalka dhirta lagu koriyo
»Ku rakibida qalabka aqalka dhirta lagu koriyo
U dhis guryaha lagu koriyo iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Ogow horumarka mashruuca markasta iyo meel kasta taleefanka gacanta
Shaqaalaha raqiiska ah
Muddada dhismaha oo kooban
Hawlo badan oo sharaf leh si loo hagaajiyo khaladaadka
HADDII aad u baahan tahay adeeg kasta oo kor ku xusan, fadlan si xor ah ayaad noola soo xiriiri kartaa!